အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ ဂေါက်ရောဂါအတွက် အစားအသောက် / ဆေးတောင့် KETO Complete
ဂေါက်ခြေထောက်အတွက် အာဟာရ- သင်စားနိုင်၊ မစားနိုင်
ဂေါက်ရောဂါရှာဖွေသောအခါတွင်၊ ဆရာဝန်များ၊ ဆေးဝါးများနှင့်အတူ လူနာများအား ဦးစွာ အစားအသောက်ကို ပြောင်းလဲရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ဂေါက်ရောဂါအတွက် အစားအသောက်သည် ရောဂါ၏ရှုပ်ထွေးသောကုသမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်း၏အသုံးပြုမှုသည် တတ်နိုင်သမျှ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် အရှိန်မြှင့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ နာကျင်မှုလက္ခဏာများကို လျင်မြန်စွာ သက်သာစေရန်၊ တိုက်ခိုက်မှုများ၏ ပြင်းထန်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး သက်သာခွင့်ကာလကို ကြာမြင့်စေမည်ဖြစ်သည်။
အစားအသောက်ကုထုံး၏ အဓိကပန်းတိုင်မှာ ရောဂါဗေဒကို တိုက်ဖျက်ရန်နှင့် ပြန်ဖြစ်ခြင်းများကို ကာကွယ်ရန် အစားအသောက်ကို စုစည်းရန်ဖြစ်သည်။ဂေါက်ရောဂါနှင့်အတူ၊ အစားအသောက်အတွက်ရည်ရွယ်သည်-
ဆီး၏ alkalinity တိုးလာ;
purine ဒြပ်ပေါင်းများ၊ ဆားများနှင့် oxalic အက်ဆစ်များ မြင့်မားသော အစားအစာများကို တားမြစ်ခြင်း အပါအဝင် ကုထုံးဆိုင်ရာ အခြေခံမူများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပေါ်တွင် hypopurine အာဟာရအမျိုးအစားကို ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။အဆီ၊ ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နှင့် ပရိုတင်းဓာတ်များ စားသုံးသည့် ပမာဏကို လျှော့ချရန်လည်း လိုအပ်သည်။
ဂေါက်ရောဂါအတွက် ကုထုံးအာဟာရနှင့် အစားအသောက်များသည် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများ၊ သဘာဝအချိုရည်များ၊ kefir၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲများ၏ အချိုးအစားကို တိုးလာစေပါသည်။အထိရောက်ဆုံးမှာ ပျမ်းမျှ ကယ်လိုရီပါဝင်မှု 2500 မှ 2800 ယူနစ်အတွင်း သင့်လျော်သော အာဟာရဓာတ် 4-5 ကြိမ် ပေးဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
သောက်သုံးမှုစနစ်သည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ အရည်များ 2.5လီတာ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ စီးဆင်းမှုကို သေချာစေသင့်သည်။
ဂေါက်ရောဂါအတွက် အစားအသောက်၏ ထိရောက်မှုကို အမြင့်ဆုံးရရန် အကြံပြုချက်များစွာကို လိုက်နာရပါမည်။
ချက်ပြုတ်ခြင်း၏အဓိကနည်းလမ်းမှာ ပွက်ပွက်ဆူနေသော၊ မုန့်ဖုတ်၊ ရေနွေးငွေ့၊
ပွက်ပွက်ဆူနေသော 10 မိနစ်ပြီးနောက်အသားဟင်းရည်ကိုထုတ်;
အသား၊ ငါး နှင့် သက်သတ်လွတ် ဟင်းလျာများ ၊
သင့်လျော်သောကုထုံးအာဟာရ၏အဖွဲ့အစည်းသည် ဂေါက်ရောဂါကို လုံးဝပျောက်ကင်းစေမည်မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းသည် ရောဂါဗေဒ၏ထင်ရှားမှုကို သိသိသာသာသက်သာစေပြီး ၎င်း၏ပြန်ဖြစ်ခြင်းကို တားဆီးပေးမည်ဖြစ်သည်။သတ်မှတ်ထားသော အစားအသောက် အမျိုးအစားသည် လူနာ၏ ယေဘူယျ အခြေအနေ၊ ၎င်း၏ ကိုယ်အလေးချိန်၊ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါများ ရှိနေခြင်းနှင့် ကျား၊မ စသည်တို့အပေါ် များစွာ မူတည်ပါသည်။
ဂေါက်ရောဂါအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အာဟာရ၏ အဓိက အမျိုးအစားမှာ အစားအသောက် ဇယား နံပါတ်6ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပြင် ဂေါက်ရောဂါရှိသူများ၊ အထူးသဖြင့် အသက်ရှုကြပ်ပြီး အဝလွန်နေသူများ မကြာခဏ အစားအသောက် ဇယားနံပါတ် ၈၊ အယ်ကာလီ၊ ဆန်နှင့် ဂျုံ အစားအစာများကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။Kefir၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊ သစ်သီး သို့မဟုတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက် အစားအစာများသည် အစာရှောင်သည့်နေ့များအတွက် ကောင်းမွန်သင့်လျော်ပါသည်။
ဂေါက်ရောဂါရှိသူများကို ပထမနေရာတွင် ညွှန်ကြားသည်။၎င်းသည် purine ဒြပ်ပေါင်းများ ဖလှယ်မှုကို ပုံမှန်ဖြစ်စေရန်နှင့် ယူရစ်အက်ဆစ်ဆားများ စုပုံခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများကို အချိန်တိုအတွင်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိစေသည်။
အာဟာရလိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ယူရစ်အက်ဆစ် တုံ့ပြန်မှု လုပ်ဆောင်ချက်ကို လျော့နည်းစေသည်။ရလဒ်အနေဖြင့် လူနာ၏သုခချမ်းသာသည် လျင်မြန်စွာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာကာ ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စဉ်များ ရပ်တန့်သွားခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း လျော့နည်းသွားခြင်း၊ အဆစ်များတွင် နာကျင်ခြင်းနှင့် တောင့်တင်းခြင်းခံစားချက်များ ပျောက်သွားပါသည်။
၎င်းသည် purines၊ refractory fats၊ ဆားအညွှန်းကိန်းမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များ၏မီနူးတွင်ငြင်းဆိုခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။
နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ နို့ချဉ်၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊ သစ်သီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို အစားထိုးရန် အဆိုပြုထားသည်။အစားအသောက်သည် တစ်ပတ်လျှင် တစ်ရက် အစာရှောင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ပထမဦးစွာ၊ ပိုမိုဆိုးရွားလာသောအခါတွင်သင်သောက်သောအရည်ပမာဏကို3လီတာအထိတိုးမြှင့်ရန်လိုအပ်သည်။ထို့နောက် အသားနှင့်ငါးပါသော ဟင်းလျာများကို လုံးဝဖယ်ထုတ်ပါ။နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့် နို့ချဉ်-နို့ထွက်ပစ္စည်း အချိုးအစားကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် တိရစ္ဆာန်များတွင် ပရိုတင်းဓာတ်ချို့တဲ့မှုကို ဖြည့်စွက်နိုင်သည်။
ရောဂါ၏ပြင်းထန်သောကာလမကုန်ဆုံးမီ အစာတစ်မျိုးမျိုး (အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊ kefir၊ ပြုတ်ထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးဝလံများ) ကို စားသုံးပြီး ဥပုသ်ရက်များကို တစ်ရက်ခြားစီ စီစဉ်ရပါမည်။
အစာရှောင်ခြင်းသည် ယူရစ်အက်ဆစ်ကို ပြတ်သားစွာထုတ်လွှတ်စေပြီး ဂေါက်ရောဂါအတွက် တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။
ဇယားနံပါတ် ၈ သည် အဝလွန်နေသူများတွင် ဂေါက်ခြေထောက်များအတွက် အာဟာရကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းညှိပေးသည်။ဤအစားအစာသည် ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိ အဆီပိုများကို ဖယ်ရှားရန် ရည်ရွယ်သည်။
ဤကိစ္စတွင် ဂေါက်ရောဂါအတွက် ကုထုံးအတွက် ယေဘုယျ လိုအပ်ချက်များနှင့် အဓိက ကွာခြားချက်မှာ ကယ်လိုရီပါဝင်မှု အလယ်အလတ် လျှော့ချခြင်းနှင့် ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နေ့လျှင် 1.5လီတာအထိ သောက်သုံးသော အရည်များ စားသုံးခြင်း ဖြစ်သည်။
ဂေါက်ရောဂါရှိသောအမျိုးသားများအတွက်၊ အစားအစာ၏ကယ်လိုရီပါဝင်မှုကို 2100-2500 ယူနစ်ထက်မနိမ့်သောအဆင့်တွင်ထိန်းသိမ်းရန်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ဂေါက်ရောဂါသည် အမျိုးသမီးများအတွက် အစားအသောက်နံပါတ် ၈ သည် မီနူးကို ၁၄၀၀ မှ ၁၇၀၀ kcal အတွင်း ကန့်သတ်ထားသည်။
Buckwheat တွင် ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းသော အစားအစာများကို အာဟာရဖြစ်စေသော အစားအသောက်များတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။၎င်း၏စားသုံးမှုသည် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသော ဇီဝဖြစ်စဉ်များကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပြီး လျင်မြန်စွာ ပြည့်ဝသောခံစားမှုကိုပေးကာ ဆာလောင်မှုခံစားချက်ကို အချိန်အကြာကြီး မေ့လျော့နိုင်စေပါသည်။Buckwheat သည် ဗီတာမင်များနှင့် သဲလွန်စအမျိုးအစားအားလုံးတွင် ထိပ်တန်းဖြစ်သည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက် သီးနှံပရိုတင်းကို စုပ်ယူမှု ပိုကောင်းပြီး တိရစ္ဆာန်ကို လုံးဝ အစားထိုးနိုင်သည် ။အရိုးနှင့် ကြွက်သားတစ်သျှူးများကို ပြန်လည်ထူထောင်သည့်အဆင့်တွင်၊ ထုတ်ကုန်သည် ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကူညီပေးသည်။Kefir နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော Buckwheat ဂျုံယာဂုသည်ဂေါက်ရောဂါအတွက်အစာရှောင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Buckwheat သည် ဆားမပါသော အစားအစာများဖြင့် မကြာခဏပြင်ဆင်သည်။Buckwheat အစားအစာသည် ဂေါက်ရောဂါ၏ အပျက်သဘောဆောင်သော အာနိသင်များကို ကျရောက်နိုင်သော အဆစ်များအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော အဆစ်များကို လျင်မြန်စွာ လျှော့ချနိုင်စေပါသည်။
ဆန်ကို အခြေခံတဲ့ အစားအစာကို ခန္ဓာကိုယ် သန့်စင်ဖို့နဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချဖို့ မကြာခဏ အသုံးပြုကြပါတယ်။ဂေါက်ထမင်းသည် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကို မြန်ဆန်စေပြီး ပိုလျှံနေသော ရေနှင့် ဆားများကို ဖယ်ရှားပေးကာ ရောင်ရမ်းခြင်းကို ကောင်းစွာ သက်သာစေသည်။မန်းဂနိစ်၊ ဆီလီနီယမ်၊ ဖော့စဖရပ်၊ သံ၊ ဇင့်၊ စပါး၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် မန်ဂနိစ်၊ ဆယ်လီနီယမ်၊ ဖော့စဖရပ်စ်၊ သံ၊ ဇင့်တို့သည် ခန္ဓာကိုယ်၏ အသက်ရှင်သန်မှုစနစ်အားလုံးကို အကျိုးပြုသည်။
ကောက်နှံများ၏ စိမ့်ဝင်နေသောဖွဲ့စည်းပုံသည် ရောဂါရှိသောအဆစ်များမှ စုပြုံနေသော အန္တရာယ်ရှိသော အဆိပ်အတောက်များ၊ ဆားများနှင့် ကပ်စေးများကို ထုတ်ယူသည်။အထူးသဖြင့် ဂေါက်ရောဂါ ပြင်းထန်နေချိန်တွင် ထမင်းကို အစာရှောင်သည့်နေ့များတွင်လည်း စားသုံးနိုင်ပါသည်။
အစားအသောက်အတွက် အညိုရောင် သို့မဟုတ် အဖြူရောင် ကောက်နှံပေါင်း ပေါင်းဆန်ရှည်ကိုသာ အသုံးပြုသည်။ဂေါက်ရောဂါကို အာဟာရဖြင့် ကုသသောအခါ၊ ဤကောက်နှံများကို နေ့စဉ်သုံးနိုင်သည်။
ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အက်ဆစ်ဓာတ် တိုးလာခြင်းသည် ဇီဝဖြစ်စဉ် ဖြစ်စဉ်များကို ထိခိုက်စေပါသည်။၎င်းသည် ကယ်လ်စီယမ်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့် အရိုးတစ်သျှူးများ ပျက်စီးခြင်းနှင့်အတူ လိုက်ပါသွားပါသည်။အယ်ကာလိုင်း အစားအစာကို အသုံးပြုခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ခြိမ်းခြောက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို တားဆီးရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။အစားအစာ၏အခြေခံသည်အသီးအနှံများ၊ နို့ချဉ်နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ဤအစားအစာကို ဂေါက်ရောဂါပိုမိုဆိုးရွားသည့်ကာလနှင့် သက်သာပျောက်ကင်းသည့်အဆင့်တွင် နှစ်မျိုးလုံးသုံးနိုင်သည်။
အာဟာရစနစ်ကို မှန်ကန်စွာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက် မည်သည့်အစားအစာများက ဂေါက်ရောဂါကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည်ကို သိထားရန် လိုအပ်ပြီး မည်သည့်အစားအစာများက အန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီး ရောဂါကို ပိုမိုဆိုးရွားစေမည်ကို သိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
purines၊ ဆား၊ အဆီနှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော အရာများ ၏ ပမာဏအပေါ်မူတည်၍ အစားအသောက် ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် ဂေါက်ရောဂါအတွက် အဓိက အစားအစာ ဇယားတွင် စာရင်းသွင်းနိုင်ပါသည်။ဂေါက်ရောဂါအတွက် ထုတ်ကုန်များစာရင်းကို ပိုင်းခြားခြင်း၏ အဓိကလက္ခဏာမှာ purine ဒြပ်ပေါင်းပါဝင်မှုဖြစ်သည်။
လတ်ဆတ်သောအဆီများသောငါး, ငါး caviar
ငါးနှင့် အသားထွက်ကုန် အမျိုးအစားအားလုံး
oxalic acid ပါဝင်သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ ရူဘာ့၊ စော်ရယ်)၊
နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ
ကောက်နှင့် ဖွဲနုမှုန့် သို့မဟုတ် ဂျုံ ၁-၂ အဆင့်မှ မုန့်ထွက်ပစ္စည်းများ
သဘာဝသကြားလုံး - marshmallow, ပျားရည်, marmalade
သစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (ပန်းဂေါ်ဖီမှလွဲ၍)
ဘယ်ရီ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၊ သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊ compotes၊ kissels၊ လတ်ဆတ်သောအရည်များ
လက်ဖက်စိမ်း၊ ကာဗွန်နိတ်မဟုတ်သော သတ္တုဓာတ်ပြုထားသော အယ်ကာလိုင်းရေ
ဂေါက်ရောဂါအတွက် မည်သည့်အရက်ပမာဏမဆို ပါဝင်သောအချိုရည်များကို သောက်ရန် တင်းကြပ်စွာတားမြစ်ထားသည်။
အစားအစာများတွင် purines နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သော အဆီများ အဆင့်ကို သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်၊ ဂေါက်ရောဂါနှင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ စားသုံးနိုင်သည့် အစားအစာများကို အတိအကျ သိရှိနိုင်ပြီး ကန့်သတ်သင့်သည်။
ဂေါက်ရောဂါအတွက် အထူးအသုံးဝင်သော ထုတ်ကုန်အုပ်စုတွင် သစ်တော်သီးများ၊ ငှက်ပျောသီးနှင့် ပန်းသီးများ ပါဝင်သည်။အသီး၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် Malic acid သည် ယူရစ်အက်ဆစ်၏လုပ်ဆောင်မှုကို ပျက်ပြယ်စေနိုင်သည်။
ပိုတက်စီယမ်သည် ယူရစ်အက်ဆစ်ပုံဆောင်ခဲများကို ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှ အမြန်ဖယ်ရှားရန် ကူညီပေးသည်။Ascorbic acid သည် ချိတ်ဆက်ထားသော အဆစ်တစ်ရှူးများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေကာ ပြန်လည်သန်စွမ်းစေသည်။အထူးသဖြင့် အချဉ်ဖောက်ထားသော နို့ထွက်ပစ္စည်းများတွင် အသီးအနှံများ၏ အာဟာရပါဝင်မှုမှာ အထူးအသုံးဝင်သည်။
ဂေါက်ရောဂါအတွက် ကောင်းမွန်သော အကျိုးကျေးဇူးများသည် လတ်ဆတ်သော ချယ်ရီသီးနှင့် ချယ်ရီသီးဖျော်ရည်များကို ပုံမှန်အသုံးပြုပေးပါလိမ့်မည်။ဘယ်ရီသီးတွေမှာ ဖရီးရယ်ဒီကယ်တွေကို တိုက်ဖျက်ပေးတဲ့ antioxidants တွေ ပါဝင်ပါတယ်။Bioflavonoids နှင့် Anthocyanins တို့သည် ဂေါက်ရောဂါကို ရောင်ရမ်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ကာကွယ်ပေးသည်။
စတော်ဘယ်ရီနှင့် စတော်ဘယ်ရီများတွင်ပါရှိသော အသုံးဝင်သောပစ္စည်းများသည် ယူရစ်အက်ဆစ်ကို ပျက်ပြယ်စေပြီး အဆစ်များအတွင်း ပုံဆောင်ခဲများ မဖြစ်ပေါ်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။
ဂေါက်ရောဂါအတွက် ဤဘယ်ရီသီးများနှင့် သစ်သီးဝလံများကို ပမာဏအကန့်အသတ်မရှိ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
အနှစ်ချုပ်ဇယားတွင်ဖော်ပြထားသောထုတ်ကုန်များအပြင်၊ ပြင်းထန်သောအသား၊ ငါးနှင့်မှိုဟင်းရည်များကိုအစားအသောက်များတွင်ဖယ်ထုတ်ရမည်။၎င်းတို့တွင် purines များ မြင့်မားစွာပါဝင်မှုကြောင့် ဂေါက်ရောဂါကို သိသိသာသာ ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။မလိုလားအပ်သောငါး, စည်သွတ်အသား, ဆား၏ကြီးမားသောရာခိုင်နှုန်းပါဝင်သော။၎င်းတို့ကို purine အစားအစာဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသည် ရေ-ဆားဟန်ချက်အား အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး အဆစ်တစ်ရှူးများတွင် ဆားများ ထပ်လောင်းထည့်ခြင်းကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။
ဂေါက်ရောဂါအတွက် တားမြစ်ထားသော အစားအစာများစာရင်းတွင် လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီနှင့် ကိုကိုးတို့ ပါဝင်ပါသည်။ဤအချိုရည်များသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ယူရစ်အက်ဆစ်ကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် ဂေါက်ရောဂါကို မသောက်သင့်ပါ။ဒါက ရောဂါပြန်ဖြစ်ခြင်းကို ဖြစ်စေတယ်။
တစ်ပတ်စာအတွက် နေ့စဉ် မီနူး
စားသုံးရန်ခွင့်ပြုထားသော ကုန်ပစ္စည်းများစာရင်း အများအပြားသည် ဟင်းလျာများရွေးချယ်ရာတွင် တစ်ဦးချင်းချဉ်းကပ်နိုင်ပြီး ဂေါက်ရောဂါရှိသူတိုင်းအတွက် မှန်ကန်စွာ စားသုံးနိုင်စေပါသည်။ရက်သတ္တပတ်အတွက် အကြံပြုထားသော အစားအစာသည် မျှတပြီး၊ ပြီးပြည့်စုံပြီး ဂေါက်ရောဂါအတွက် အသုံးဝင်သော အစားအစာများဖြစ်သည်။
မနက်စာ ၁ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ rosehip ဟင်းရည်၊ မုန်လာဥနီသုပ်
နံနက်စာ ၂ ငှက်ပျောသီး, kefir
ညစာ ကြာဇံ၊ အာလူးပြုတ်၊ ကြက်သွန်ချဉ်ရည်၊ ပန်းသီးဖျော်ရည်နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဟင်းရည်
နေ့လည်လက်ဖက်ရည် ပန်းသီး၊ ဒိန်ခဲမုန့်၊ သံပုရာလက်ဖက်ရည်
ညစာ Zucchini caviar, kissel
မနက်စာ ၁ ဆန်ယာဂု၊ သစ်တော်သီးဟင်းရည်၊ ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်
နံနက်စာ ၂ သစ်သီးသုပ်၊ kissel
ညစာ ကြက်သွန်နီဟင်းချို၊ သစ်တောမှိုနှင့် မုယောဂျုံယာဂု၊ သစ်သီးခြောက် compote
နေ့လည်လက်ဖက်ရည် သစ်တော်သီး၊ ရွှေဖရုံသီးကြော်
ညစာ ဒိန်ချဉ် soufflé၊ လင်ဒင်လက်ဖက်ရည်
မနက်စာ ၁ ဂျုံယာဂု၊ apricot ဖျော်ရည်
နံနက်စာ ၂ ချယ်ရီသီး၊ rosehip ဟင်းရည်နှင့်အတူဒိန်ချဉ်
ညစာ ငါးအသားလုံး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စွပ်ပြုတ်၊ ပန်းသီးဂျယ်လီနှင့် ဟင်းချို
နေ့လည်လက်ဖက်ရည် အချဉ်မုန့်၊ compote နှင့်အတူချိစ်ကိတ်
ညစာ pilaf, prunes, kefir နှင့်အတူ
မနက်စာ ၁ ဆန်အိုး၊ မစ်ရှိတ်၊ ပန်းသီးနှင့် coleslaw
နံနက်စာ ၂ ခရင်မ်၊ လက်ဖက်စိမ်းနှင့် စတော်ဘယ်ရီ
ညစာ အချဉ်မုန့်၊ buckwheat၊ နှမ်းသီးနှင့်ကြက်ဆင်ရင်သား၊ mint လက်ဖက်ရည်နှင့်အတူ Beetroot
နေ့လည်လက်ဖက်ရည် စတော်ဘယ်ရီ၊ မုန်လာဥနီဖျော်ရည်နှင့်အတူပန်ကိတ်
ညစာ သစ်တော်သီး compote၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အတူဒိန်ခဲ casserole
မနက်စာ ၁ စပျစ်သီးပျဉ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည်၊ သစ်သီးသုပ်နှင့်အတူ Oatmeal
နံနက်စာ ၂ သံလွင်ဆီ၊ လိမ္မော်ရည်နဲ့ သခွားသီးသုပ်
ညစာ Buckwheat ဟင်းချို၊ ဆန်နှင့်ဖုတ်ထားသော zucchini၊ လိမ္မော်ရည်
နေ့လည်လက်ဖက်ရည် ငှက်ပျောသီး၊ oatmeal ဂျယ်လီ
ညစာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ kefir နှင့်ပေါင်းထားသောငါး
မနက်စာ ၁ ပြောင်းဆန်နို့ယာဂု၊ဇီးသီးဖျော်ရည်
နံနက်စာ ၂ မုန်လာဥနီနှင့် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ပန်းသီးတစ်လုံးနှင့် သုပ်ပါ။
ညစာ ကြက်ဥစွပ်ပြုတ်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်လိပ်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် ကြက်ဆင်သား၊ ပန်းသီးဖျော်ရည်
နေ့လည်လက်ဖက်ရည် ငှက်ပျောသီး၊ စတော်ဘယ်ရီလက်ဖက်ရည်နှင့်အတူ အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ
1st နံနက်စာ ကြက်ဥပြုတ်၊ ရေနွေးကြမ်း
2nd နံနက်စာ သစ်တော်သီး၊ marshmallow နှင့်အတူအစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်
ညစာ အသား၊ မကာရိုနီ နှင့် ဒိန်ခဲ၊ အသီးအနှံများ မပါသော ဘော့စ့်
နေ့လည်လက်ဖက်ရည် အိမ်တွင်းဒိန်ခဲနှင့်အတူဖုတ်ပန်းသီး, သံပုရာသောက်
ညစာ Vinaigrette, လင်ဒင်၏ဖျော်ရည်
ခွင့်ပြုထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများကို ပင်မမီနူးတွင် အကန့်အသတ်မရှိ ပမာဏအဖြစ် စားသုံးနိုင်ပါသည်။ခြေချောင်းကြီးတွေအပါအဝင် ဂေါက်ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေအတွက် ဂျုံပေါင်မုန့်ကို မသုံးတာက ပိုကောင်းပါတယ်။
ဂေါက်ရောဂါအတွက် သဘာဝပျားရည်ကို ဖြည့်စွက်ထားသော အစားအစာများသည် ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
တစ်ပတ်အတွက် အဆိုပြုထားသော နမူနာမီနူးတွင် သင်စားလိုသည်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော အစားအသောက် ဟင်းလျာများစွာ ပါဝင်ပါသည်။ဆန္ဒရှိပါက ဂေါက်ရောဂါအတွက် ခွင့်ပြုထားသော အစားအစာများစာရင်းနှင့် ဂေါက်ရောဂါရှိသူများ မစားနိုင်သော အစားအသောက်များဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ စာရင်းကို အသုံးပြု၍ အခြားသူများနှင့် အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
မုန်လာဥနီ၊ မုန်လာဥနီ၊ ကြက်သွန်နီ ၁ လုံးကို အခွံခွာထားပါ။ခရမ်းချဉ်သီး (သို့) စားပွဲတင်ဇွန်း 1 ဇွန်းထည့်ပြီး အကြမ်း grater ပေါ်တွင် ခြစ်ထားသော ကြက်သွန်နီနှင့် အမြစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို သံလွင်ဆီတွင် ပြုတ်ထားပါ။ဌ။ခရမ်းချဉ်သီး။အာလူး ၄ လုံးကို အတုံးလေးများတုံးပြီး ရေ 1.5လီတာတွင် ပြုတ်ပါ။10 မိနစ်။ပြုတ်သည်အထိ လတ်ဆတ်သော ဂေါ်ဖီထုပ်များကို အမြီးပိုင်းဖြတ်၍ ထည့်ပါ။5 မိနစ်။- ဟင်းသီးဟင်းရွက်စွပ်ပြုတ်။အရသာအတွက် ဆားနဲ့ ရောနယ်ပါ။ကျွေးတဲ့အခါ နံနံပင်၊ ဇီယာစေ့နဲ့ အချဉ်မုန့်တစ်ဇွန်းထည့်ပါ။
pilaf နှင့် prunes
ဆန်တစ်ခွက်ကို ရေဆေးပါ။ဟင်းရွက်ဆီပါတဲ့ အိုးတစ်လုံးထဲမှာ ကြက်သွန်နီ ၂ လုံးကို အမြှောင်းလေးတွေလှီးပြီး မုန်လာဥနီ ၂ လုံးကို အတုံးလေးတွေဖြစ်အောင် ထည့်ပါ။အရာအားလုံးကို အနည်းငယ်ပြုတ်ပါ။ဆေးကြောပြီး လှီးထားသော ဆီးသီး ၁၀ တောင့်ကို ထည့်ပါ။အသီးအရွက်များ ပျော့သွားသည်အထိ အားလုံးကို ဖြတ်ပါ။ဆန်ကိုလောင်း၊ ဆီနှင့်လုံးဝပြည့်သွားအောင်ရောမွှေပါ၊ ပွက်ပွက်ဆူနေသောရေ ၂ ခွက်ကိုလောင်းပါ။ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့်ဆားကိုအနည်းဆုံးထည့်ပါ။ပွက်ပွက်ဆူပြီးနောက် အပူကိုလျှော့ချပြီး တင်းကျပ်သောအဖုံးအောက်တွင် မိနစ် 20 ခန့်ချက်ပြုတ်ပါ။
ဆန်ခွက်တစ်ဝက်စာ 1 လီတာ ပြုတ်ပါ။ရေ 10 မိနစ်။ဆန်ကို ရေဆေးပြီး ရေဆေးပါ။နို့တစ်ခွက်နဲ့ လောင်းပြီး နောက်ထပ် 25 မိနစ် ပြုတ်ပါ။ဂျုံယာဂု ပျော့လာသည်အထိ၊ကြက်ဥ ၂ လုံးကို ရောပြီး စပျစ်သီး 50 ဂရမ်ကို ရေနွေးငွေ့ဖြင့် ထုပါ။အအေးခံထားသော ယာဂုနှင့် ရောမွှေပြီး ဓားဖျားတွင် ဆားနှင့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းထည့်ပါ။ဆာဟာရဆီဆီဒယ်အိုးထဲတွင် အလယ်အလတ်အပူရှိန်ဖြင့် မီးဖို၌ ရွှေညိုရောင်အထိ ဖုတ်ပါ။ချယ်ရီရည်ဖြင့် ကျွေးပါ။
စတော်ဘယ်ရီနဲ့ အရွက်ခြောက်တစ်တုံးကို ပွက်ပွက်ဆူနေတဲ့ ရေတစ်ခွက်ကိုလောင်းပြီး ၃ မိနစ်လောက်စိမ်ထားပါ။သကြားမပါဘဲသောက်ပါ။
ဂေါက်ရောဂါအတွက် သင့်လျော်သောအာဟာရသည် လူနာ၏ဘဝတွင် နေ့စဉ်ပုံမှန်ဖြစ်သင့်သည်။၎င်းသည် ရောဂါဗေဒ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နှေးကွေးစေသည် သို့မဟုတ် လုံးဝရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်သည်။ရလဒ်အနေဖြင့် အခြားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အစားအသောက်သည် ဆေးဝါးကုထုံးအတွက် အစားထိုးမဟုတ်၊ ဖြည့်စွက်စာဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားထားရပါမည်။အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်၏ အကြံပြုချက်များကို ကုသမှုအဆင့်တိုင်းတွင် လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။